किड्नी फेल कसरी हुन्छ ? किड्नी सम्वन्धि यी ७ महत्वपूर्ण जानकारीहरु जानिराखौं – Paluwa Khabar
किड्नी फेल कसरी हुन्छ ? किड्नी सम्वन्धि यी ७ महत्वपूर्ण जानकारीहरु जानिराखौं
चैत्र २५, २०७७ बुधबार 35
किड्नी हाम्रो शरिरको महत्वपूर्ण अङ्ग हो । किड्नीमा खरावी आयो भने हामिलाई बिभीन्न रोगहरु लाग्ने गर्दछन जसका कारण
हामिले ज्या’नै गु’माउनु पर्ने समेत अवस्था आउँदछ । तसर्थ कि’ड्नी भनेको के हो ?
मानव शरिरमा किड्नीले के कसरि काम गरिरहेको हुन्छ, किड्नी कसरि काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्दछ र कि’ड्नी बचाउनको लागि के गर्नुपर्दछ ?
लगायतका कुराहरु जान्नको लागि पढ्नुहोस कि’ड्नी सम्वन्धि १० महत्वपूर्ण जानकारीहरु ।
किड्नीले शरीरमा रस एवं रगतमा उपस्थित विजातीय तथा अनावश्यक तत्वलाई पिशाबबाट बाहिर निकाल्ने काम किड्नीले गर्दछ ।
प्राकृतिक रूपमा स्वस्थ कि’ड्नीसँग दिनहुँ ६० किलो जति पानी छान्ने क्षमता हुन्छ ।
फेरि पनि सामान्य रुपमा किड्नीले २४ घण्टामा एकदेखि दुई लिटर पिशाब बनाएर शरीरलाई निरो’ग राख्दछ ।
मु’टुद्वारा पम्प गरिएको रगतको २० प्रतिशत कि’ड्नीमा जान्छ, जहाँ यो रगत सफा भई पुनः शरीरमा जाँदछ ।
यसरी किड्नीले हाम्रो रग’त सफा गर्दछ र सबै टाँक्सि’न्स पि’साबबाट शरीरको बाहिर निस्कन्छ ।
किड्नी हाम्रो शरीरको सन्तुलनकारी अंग हो । यसको मतलब यदि शरीरमा कुनै चिज बढी या कम हुन्छ भने किड्नीले त्यसलाई सम्हाल्दछ ।
किड्नीको विशेष सम्बन्ध मुटु, फे’क्सो र कलेजो सँग हुन्छ । मुख्य गरी मुटु र किड्नीले परस्पर सहयोगको साथ काम गर्ने गर्दछ । त्यसकारण, यदि कसैलाई मुटु रो’ग लागेको छ भने उसको किड्नी पनि विग्रन्छ ।
त्यसबेला त्यो व्यक्तिको रक्त’चाप उच्च हुन्छ र क्रमशः मुटु पनि दुर्बल भएर जान्छ । किडनीका रोगीहरु दिनानुदिन बढीरहेका छन् ।
किड्नी फेलहुनाका मुख्य कारणहरुमा मुटु, दम, श्वास, टि.बी., सुगर, प्रेसरजस्ता रोगहरुको निदानका लागि भनेर आधुनिक औष’धीहरुको बढी सेवन गर्नु हो ।
यी आधुनिक औषधीहरुको अल्प’कालीन सेवनको विना’शकारी प्रतिक्रियाको रुपमा पनि कि’ड्नी फेल जस्तो गम्भीर रो’ग हुने गरेको देखिन्छ । यी आधुनिक औषधीहरुको विषाक्त प्रभावका कारण नै किड्नी तथा पि’शाबसम्बन्धी रो’ग उत्पन्न हुन्छ ।
४.किड्नी भनेको के हो ?
यो हाम्रो शरिरमा कहाँनिर हुन्छ ?
किड्नी खराब हुनुको मुख्य लक्षण सुन्निनु हो । शरीरमा पानीको मात्रा बढी भयो भने सुन्निने समस्या हुन्छ भने नूनको मात्रा बढी भयो भने उच्च रक्त चाप हुन्छ ।
यसबाहेक रगत बनाउनु, ह’ड्डिहरुलाई मजबु’त पार्नु अर्थात् भिटामिन ‘डी’ बनाउनु, उच्च’रक्तचाप नि’यन्त्रण गर्नु र शरीरमा उत्पन्न भएका ख’राब पदार्थलाई शरीरबाहिर निकाल्ने काम गर्दछ । किड्नीका कैयौं समस्याहरु हुन्छन्, जसलाई जान्न आवश्यक छ ।
किड्नीमा फिल्टर अर्थात् स–साना छिद्र हुन्छ, जसले खराब तत्वलाई शरीर बाहिर निकाल्ने र राम्रो तत्वलाई शरीरका लागि लाग्दछ ।
नेफ्रो’टिक सि’न्ड्रोममा किड्नीमा जुन फिल्टर हुन्छ, त्यसका छिद्रहरु ठूलो भएर जान्छ र ती छिद्रबाट शरीरका लागि उपयोगी तत्व पनि ख’राब तत्वका साथमा बाहिर निस्कन्छ ।
परिणामतः विहान अनुहार सुन्निने तथा बेलुका खुट्टा खासगरी पैताला सुन्निने गर्दछ । यो किड्नी वि’रामीको सुरुको लक्षण हो ।
उपचार यसको उपचारका लागि बायोप्सी नामको क्रिया गरिन्छ, जसको माध्यमद्वारा पत्ता लाग्दछ कि न्यू’ट्रोटिक सि’न्ड्रोम कुन अवस्थामा छ भन्ने । सही तरिकाबाट उपचार गर्नाले विरामी निको हुन्छ ।
तर सुन्निने समस्याप्रति ध्यान दिएन र समयमै उपचार गरेन भने विस्तारै विस्तारै किड्नी फेल हुन पुग्दछ । सावधानी जब सुन्निने समस्या देखापर्दछ, तुरुन्तै किड्नी विशेषज्ञको सम्पर्कमा जानुपर्दछ ।
खानामा नून कम गर्ने र पिउने चिजमा पानीको मात्रा एकदेखि डेढ लिटर मात्र पिउनु पर्छ । यो भनिन्छ कि पानी धेरै पिउनाले किड्नी ठीक रहन्छ, यो भनाइ सही होइन ।
Prevआज राती १२ बजेबाट लागु हुने गरि ओली सरकारले गर्यो फेरि जनता रुवाउने यस्तो निर्णय, जारी भयो सूचना
Nextमैले माया गरेको हु त्यसैले झु’ट बोले , पैसाको कुनै माग गरेको छैन (हेर्नुहोस् भिडियो)